21 Kushambadzira Mitemo yekushamisa / Kushatirisa Vaunoshanda Navo | Martech Zone
21 Ekushambadzira Mitemo yekushamisa / Kushatirisa Vaunoshanda navo
Chitatu, Nyamavhuvhu 17, 2011 Chitatu, December 12, 2012 Douglas Karr
Ini ndaive ndakagara pamba ndichiverenga zvimwe zvekuverenga manheru ano. Ndiri mukomana akanaka kwazvo saka pese pandinorova mamwe mazwi matsva, ini ndinowanzodzvanya kuWikipedia kuti ndione kuti chii chandiri kuverenga. Ndiri kukwirawo kumusoro uko mumakore… saka mushure mekunge ndaverenga zvazviri, ndinotenderedza maziso angu ndodzokera kuverenga.
Chikonzero ini ndinotenderedza maziso angu ndechekuti vanyori (kunyanya vanyori vekushambadzira) vanogara vachinzwa vachimanikidzwa kuti vagadzire mazwi matsva ekuti tidzidze uye kutsiva eakare, anofinha mazwi. Ini ndinofungidzira zvinoita kuti vanzwe vakangwara isu tichidzokera mukusakwanira.
Heano mamwe emashoko aya:
Paid Midhiya - Taimboidaidza izvi kushambadza.
Yakawana Midhiya - Taimboidaidza izvi izwi-remuromo.
Muridzi weMedia - Taimboidaidza izvi hukama hwevanhu.
motokari - Taimboidaidza izvi circulation or maonero.
Gamification - Taimboidaidza izvi mubayiro, kuvimbika, badge or nongedzo masisitimu. Mukomana Scout mabheji ari munenge muna 1930, ichi hachisi chitsva vanhu.
kupana nduma - Taimboidaidza izvi kuverenga, achiteerera, kana kuona (uye gare gare… kupindura)
Content Marketing - Taimboidaidza izvi kunyora.
Kuita-kune-chiito - isu taimboidaidza iyi kushambadzira. Kungoti nekuti zvaive panzvimbo yedu pachedu, hazvireve kuti taida zita idzva.
kumhanyisa - taimboidaidza izvi ushambadzi.
Girafu - (semuenzaniso. Yemagariro Girafu) isu taiwanzo kungotsanangura izvi se ukama.
simba - taimboidaidza izvo mukurumbira.
Optimize - taimboidaidza izvi kuvandudza.
Kudzora - taimboidaidza izvi kuronga.
Mapikicha - taimboidaidza izvi dhibhodhi.
Analytics - taimboidaidza izvi mishumo.
Updated: Vanhu - taimboidaidza izvi Zvikamu zvichibva pane zvehunhu kana huwandu hwevanhu hwakagadziriswa nevanopa dhata.
Infographics - taimboidaidza izvi mifananidzo, dzimwe nguva data mifananidzo, kana zvekunamira. Isu tinosungirira iwo anotonhorera mune edu cubicles (er .. nzvimbo dzekushandira).
Verbiage - taigara tichidaidza avo mashoko.
Whitepaper - isu takangodaidza iwo mapepa. Vaingouya vachena chete.
Hunyama - isu taisambo fonera icho chero chinhu .. isu taitofanira kudaira foni kana musuwo tiri munhu.
Wedzera: Context Kushambadzira - Isu taidaidza izvo zvine simba kana zvakanangwa zvemukati.
Kune mamwe mazwi akakura, zvakare… musanganiswa, fusion, velocity, demokrasi, muchinjikwa-chiteshi, templatize, kuunganidzwa, kubatanidza, kumhanyisa…
Varume ava vanofanirwa kudzoka paGoogle +, kurara, uye kuidimikira pasi kusvika kugwaro rechisere regiredhi ratinoyeuka isu. Sei kune kudiwa uku nevanhu kuti vagare vachinja? Pamwe kuidana nechimwe chinhu chitsva zvinoreva kuti neimwe nzira takachinja? (Ini handizvitenge, iwe?).
Ini ndinofunga makambani mazhinji achiri kunetsekana nekureruka kwekumaka kana kupedza chikoro kubva kune yakashata webhusaiti, usatombo funga yemasanganiswa yakamhanyisa yakawanikwa midhiya mushandirapamwe ane velocity inowedzeredzwa nekubata kwevanhu.
Mukutendeseka kose, ndinofungidzira ndine mhosva, futi. ndine nyowani midhiya agency, kwete kambani yekutengesa. Zviri zvechokwadi zvakawanda zve inbound yekushambadzira agency… Asi ndakabhejera kuti kucharamba kuripo mifananidzo itsva, asi inbound inogona kutsiviwa nerimwe benzi nyowani izwi senge acute.
Iwe unoziva, zvinopesana regedzera.
Tags: kukurumidzaAnalyticssimbakudana kuzviitoContent Marketingkushambadzira kwemamirirocurationyakawana midhiyaKubatanagamificationgrafukuita kwevanhuKushambadzira Infographicsoptimizenhepfenyurovanobhadharwa midhiyavanhumamakisimotokariverbiageWhitepaper
Aug 18, 2011 pa 4: 21 AM
Kunze kwekunge ini ndaifunga "zvemukati kushambadzira" kwaive "kutengesa kunyora." Kana kunyanya "kutengesa zvinhu zvakange zvatonyorwa kare."
Ndinovenga kuzvibvuma, asi ini ndashandisa kanenge 7 eaya 1) ndisingafunge nezvazvo kana 2) nechiso chakatwasuka.
Aug 18, 2011 na2: 02 PM
Erik - Ini ndinovashandisa, futi! Nehurombo, isu tinofanirwa kufambirana neazvino terminology uye nekuishandisa. Kana zvisina kudaro isu tinotaridza senge hatina kushanduka!
Aug 18, 2011 pa 9: 24 AM
Ichi chinyorwa chakandiita kunyemwerera, ndanga ndichishandisa mamwe emazwi aya kwemakore uye mamwe kwete zvachose… zvakadaro! Segmentation uye zvikamu zvemusika zvakagara zviri izwi rekushambadzira zvirokwazvo .. zvirokwazvo rimwe randave ndichishandisa kwemakore makumi maviri apfuura zvakadaro!
Aug 18, 2011 na2: 07 PM
Ini ndinorangarira pakaumbwa mhando dzehunhu uye isu taingoita "mibvunzo" uye tichigadzirisa macampaign kune iwo 'marudzi'. Handikwanise kuyeuka ndichiitumidza segmentation kumashure panguva iyoyo - kunyangwe ingave yaive iriko! Zvino gare gare takavadaidza kuti "manas"… pamwe ingadai yakave iri nani kunyora!
Aug 18, 2011 na2: 15 PM
Ndakafarira komomendi yako zvakanyanya, ndakaigadziridza Paula !!!
Aug 18, 2011 na2: 54 PM
Ndatenda Douglas, fave yangu mune runyorwa nyowani inofanirwa kuve Chiremera chinotsiva Mukurumbira, zvinongopa chirevo chitsva chose chekudzika kwezivo, izvo zvinogona kana kunge zvisiri zvechokwadi, asi zvinonzwika zvikuru! 🙂
Aug 23, 2011 na2: 48 PM
Kuvhima basa kunoonekwa semushambadziro, kwete kunyorera basa. Ini handina kuona "personal branding" yaimbodaidzwa kunzi "zvinodiwa" kana uchinongedzera kune anenge achitsvaga basa. Wese munhu nhasi ane "brand" yaimbove yavo "kuzivikanwa" kana "kiyi hunyanzvi" kana "masimba epamusoro." Oo, imwe "magwaro ekushambadzira" aimbozonzi tangazve kana bio izvozvi zvinonziwo "nhoroondo yepamhepo." "Basa" i "mukana" uye "dambudziko" i "chinetso." "Vashandi" vakapinda mu "zviwanikwa zvevanhu" zvakashanduka kuita "kutora tarenda." Saka zvinoenderera… ..
Aug 24, 2011 na3: 28 PM
Nice chidimbu. Ndinongoda kuona mumwe munhu achirova "kuwedzera" kubva mumutauro!
Aug 24, 2011 na5: 40 PM
Ah murume! Kuwedzera ndeimwe yezvandinoda. 🙂
Aug 24, 2011 na5: 09 PM
Zvinonakidza uye ndezvechokwadi muzviitiko zvakawanda! Asi ini ndinofunga kuti vatengesi vari kuyedza kutaura nemutauro unonzwisisika nevatengi vavo uye "general marketing veruzhinji". Zvakafanana neyazvino sygnal system.
Aug 24, 2011 na5: 41 PM
Ndinovimba kudaro Lana! Ini ndinofunga dzimwe nguva tinoshandisa mamwe emazwi aya uye zviri kutyisidzira!
Sep 1, 2011 na4: 40 PM
Ini ndanga ndichisangana nemumiriri zuro uyo anofarira kublogi uye kushambadzira kwepamhepo. Akandiudza kuti ndinotaura sevanhu vakaisa yavo saiti blog. Enda kwandiri kunofunga nezve kwese kwandinoda chaizvo…. Ini ndinofungidzira mushure mekuverenga zvakawanda info pazvinhu zvine chekuita nekutengesa, iwe unongotora mazwi usingazvione.
Mbudzi 27, 2011 na4: 47 PM
Uye pano ndakafunga kuti izwi rekuti "curation" raive izwi rechine tsamba. Ndakamira ndichigadziriswa 😉
Kunakidzwa nechinyorwa ichi.
Nov 29, 2011 pa10: 32AM
Chinyorwa chakakura uye ichokwadi nezve vanhu vanofunga zvinhu 'zvavanoda' kushanduka. Zvinotaridza kuti zviri muchimiro chevanhu kurondedzera hunyanzvi nezvose zviri zvitsva nekuvandudzwa - zviri pachena kuti izvi zvinosanganisira mazwi. Imwe yakanaka yakanyorwa nechinyorwa kubva munharaunda yemasikati nhasi yaive "mubatanidzwa" ikozvino kutsiva "kubatana." (http://socialmediatoday.com/node/397449&utm_source=feedburner_twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=autotweets)
Aug 25, 2012 pa 10: 28 AM
Mumwe chipangamazano wevharbard ini ndinoyambuka nzira nevanoda kushandisa izwi rekuti 'bifurcation' mune wega mutsara wechitatu. Haugone kungoti 'tobva tavaparadzanisa kuva mapoka maviri.' Ini ndinofungidzira iwe unogona kubhadharisa yakawanda kana vanhu vasingakunzwisise.
Ini ndaizotora nyaya ne 'kufona kuti ndiite.' Ndine mabhuku ekunyora kubva kuma1920's ane zvitsauko zvakatsaurirwa kugadzira ekumanikidza mafoni ekuti chiitwe. Chero ani arikuishandisa seyakafanana kune 'banner ad' anoshaya chakakomba kushambadzira kumashure.